We love going to the zoo. One of the best places for kids in Mandalay, Myanmar. Nature and animals in the exotic country. A must do in Mandalay, Myanmar.
Yangon zoological garden Short tour
Myanmar, Yangon Zoo, hippo 2
အမျိုးသမီးကလေးများသင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)မှ အမျိုးသမီးကလေးများအား တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့ လေ့လာရေးခရီစဉ်ပို့ဆောင်ပေးခြင်း 5BB ၏ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများကိုယ်စား 5BB ၏ ၀န်ထမ်းမိသားစုများမှ ၂၁.၁.၂၀၁၈ (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ အမှတ်(၄၉)၊ မလိခလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော အမျိုးသမီးကလေးများသင်တန်းကျောင်းရှိ မိဘမဲ့၊ ခိုကိုးရာမဲ့ အမျိုးသမီးကလေးများ (၉၃)ဦးကို တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်(ရန်ကုန်)သို့ ပျော်ရွှင်စရာလေ့လာရေးခရီးစဉ်အဖြစ် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကလေးများအလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ အရင်က ၂ ခါရောက်ဖူးတယ်ဟု သိရပြီး ဒီတခေါက်ပွဲတွေပါကြည့်ရလို့ အလွန်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ၂၀၁၈ နှစ်သစ်ရဲ့ ကြည်နူးဖွယ်ရာခရီးစဉ်လေးကို 5BB ၏ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါကြောင်း မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အမျိုးသမီးကလေးများသင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်) သည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်သော Vigliance Society က ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် Home for Girls အမည်ဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ လွှဲပြောင်းလက်ခံရယူခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးကလေးများသင်တန်းကျောင်း (Training School for Girls) အမည်ဖြင့်ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါသည်။ ထိုကျောင်းတွင် အသက် ၈ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အတွင်း မိဘမဲ့၊ ခိုကိုးရာမဲ့ အမျိုးသမီးကလေးများကို လက်ခံပြုစုစောင့်ရှောက်လျက်ရှိပါသည်။ မူလတန်းသမီးငယ်လေးများအား ထိုကျောင်းဝင်းအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့်မူလတန်းကျောင်းတွင် သင်ကြားပေးပြီး ၊ အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်း နှင့် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေသော သမီးငယ်လေးများကို ပြင်ပအစိုးရကျောင်းများတွင် တက်ရောက် သင်ကြားစေခြင်း ၊ အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်များဖြစ်သော စက်ချုပ် ၊ ကွန်ပျူတာ ၊ စိုက်ပျိုးရေး ပညာရပ်များအားလည်း သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထိုကျောင်းမှ ကလေးအများစုသည် ပညာရေးတွင် ထူးချွန်သောကလေးများ ဖြစ်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ မိဘပြည်သူများမှလည်း လှူဒါန်းလိုပါက အမျိုးသမီးကလေးများသင်တန်းကျောင်း၊ ဖုန်း ၀၁-၉၆၆၀၃၀၂ ၊ ၀၉၄၃၁၂၅၄၃၈ ၊ ၀၉၄၂၀၀၄၀၇၇၂ သို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ 5BB မိသားစု #5BB_CSR
Myanmar, Yangon Zoo, Himalayan Bear
Yangon, Myanmar Vlogs (Zoo, Park)
YADANABON ZOO MANDALAY MYANMAR
Myanmar, Yangon Zoo (Yangon zoological garden)
Myanmar, Yangon Zoo, hippo 1
5BB & Training School for Girls (Yangon, Myanmar) - Zoo Visit
အမျိုးသမီးကလေးများသင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)မှ အမျိုးသမီးကလေးများအား တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့ လေ့လာရေးခရီစဉ်ပို့ဆောင်ပေးခြင်း 5BB ၏ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများကိုယ်စား 5BB ၏ ၀န်ထမ်းမိသားစုများမှ ၂၁.၁.၂၀၁၈ (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ အမှတ်(၄၉)၊ မလိခလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော အမျိုးသမီးကလေးများသင်တန်းကျောင်းရှိ မိဘမဲ့၊ ခိုကိုးရာမဲ့ အမျိုးသမီးကလေးများ (၉၃)ဦးကို တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်(ရန်ကုန်)သို့ ပျော်ရွှင်စရာလေ့လာရေးခရီးစဉ်အဖြစ် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကလေးများအလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ အရင်က ၂ ခါရောက်ဖူးတယ်ဟု သိရပြီး ဒီတခေါက်ပွဲတွေပါကြည့်ရလို့ အလွန်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ၂၀၁၈ နှစ်သစ်ရဲ့ ကြည်နူးဖွယ်ရာခရီးစဉ်လေးကို 5BB ၏ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါကြောင်း မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အမျိုးသမီးကေ...
အမျိုးသမီးကလေးများသင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)မှ အမျိုးသမီးကလေးများအား တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့ လေ့လာရေးခရီစဉ်ပို့ဆောင်ပေးခြင်း 5BB ၏ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများကိုယ်စား 5BB ၏...
We love going to the zoo. One of the best places for kids in Mandalay, Myanmar. Nature and...
အမျိုးသမီးကလေးများသင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)မှ အမျိုးသမီးကလေးများအား တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့ လေ့လ...
Yangon, Myanmar Vlogs (Zoo, Park)...
YADANABON ZOO MANDALAY MYANMAR...
Myanmar, Yangon Zoo (Yangon zoological garden)...
Myanmar, Yangon Zoo, hippo 1...
5BB & Training School for Girls (Yangon, Myanmar) ...
Myanmar, Yangon Zoo, Himalayan Bear...